China Alumiunm Alloy stovu ofufe ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Womho
Alumiunm Alloy stovu fanMaterial: Alumiunm AlloyAnodization usoroBlades Agba: Black / ọlaọcha / ọla edo / bilie ọbara ọbara / isi awọ / nickel Meas: LxH: 135 * 103 * 197mm NW: 0.63 n'arọ GW: 0.86kg
Emebere onye ofufe na agụba site na aluminom, puru iche anodized pupụtara nke na-adịghị nchara ma ọ bụ corrosion na osisi a na-afụ ọkụ ọkụ ka ezubere iji wepụta ọkụ ọkụ dị oke ọkụ. nke ígwè na isi nke onye ofufe bụ a Bimetallic warara e mere iji bulie na nsọtụ nke ofufe dịtụ ka kacha arụ ọrụ okpomọkụ na-eru nso.
Rụ ọrụ karịa okpomọkụ a tụrụ aro nke 350degrees nwere ike imebi onye ofufe na ọkụ eletrik na-eweta nkeji ma mebie akwụkwọ ikike gị. Zere ụmụaka ịpụ n'anya mgbe ị na-eji ya.
Jide n'aka na ị dokwasịrị onye ahụ na-afụnwu ọkụ na stovu gị dị larịị n'akụkụ akụkụ ma ọ bụ azụ stovu ahụ.
A haziri onye na-ahụ maka afụnwu ọkụ maka iji ya mee ihe n’ọkụ na-anaghị akwụ ụgwọ nke nwere ogo ikuku dị n’etiti ogo 80 na 350degrees Celsius. Wepu fan na stovu ma ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ karịa 350ºC.
Ejila aka na isi ihe ọkụ ọkụ, etinyela fan ahụ n'echeghị echekwa mgbe ị na-ekpo ọkụ. Kwaga ma ọ bụ buo onye ofufe ahụ, na-ejikwa ihe ndọtị ahụ eme ihe.
Omume nchekwa ọkụ dị mma gụnyere ojiji nke temometa.
Maka abamuru kachasị mma, dobe onye ahụ na-ekpo ọkụ ọkụ n'azụ stovu iji mee ka ọ dịkwuo elu ikuku ikuku. Onye ofufe ahụ ji nwayọ na nwayọ na-ebugharị ikuku site na mpaghara na-ekpo ọkụ n'akụkụ gburugburu ya iji kesaa okpomọkụ gburugburu ụlọ ahụ. Ikuku na-ekpo ọkụ na-ebugharị na etiti ụlọ ahụ karịa ịrịgo elu n'elu ụlọ ka ọ na-ahapụ ebe ahụ. Igwe ikuku ikuku a ka mma na-ebute nkasi obi ka ukwuu na obere oriri mmanụ. Ihe ohuru ohuru nke nkuchi ahihia na-eme ka ikuku ikuku buru ibu karia iru ikuku
Nke gara aga: Alumiunm Alloy afụnwu ọkụ
igba ígwè enamel skillet
Igba ígwè enameled cookware maka European na USA
igba ígwè green enameled skillet